Bulukeetiga cad ee siligga buluugga ah
Mawjadaha wanaagsan ee fosfooraha madow ee boolal qalalan
Lowska lix geesoodka ah waxaa loo isticmaalaa boolal iyo boolal si loogu xiro loona adkeeyo qeybaha dhexdooda, nooca I hegagon lowska ayaa ah midka ugu badan ee la isticmaalo. Nooca Class C waxaa loo isticmaalaa mashiinada, qalabka ama qaabdhismeedka dusha sare leh iyo shuruudaha saxda ah ee hooseeya.Kalaaska A iyo lowska heerka B waxaa loo isticmaalaa mashiinada, qalabka ama qaababka leh dusha sare ee siman iyo shuruudaha saxda ah ee sare. wuu ka sii dhumuc weyn yahay, kaas oo inta badan loo adeegsado xilliyada rakibidda iyo kala-goynta ...
Lowska lix geesoodka ah waxaa loo isticmaalaa boolal iyo boolal si loogu xiro loona adkeeyo qeybaha dhexdooda, nooca I hegagon lowska ayaa ah midka ugu badan ee la isticmaalo. Nooca Class C waxaa loo isticmaalaa mashiinada, qalabka ama qaabdhismeedka dusha sare leh iyo shuruudaha saxda ah ee hooseeya.Kalaaska A iyo lowska heerka B waxaa loo isticmaalaa mashiinada, qalabka ama qaababka leh dusha sare ee siman iyo shuruudaha saxsanaanta sare. waa ka sii dhumuc weyn tahay, taas oo inta badan loo adeegsado xilliyada rakibidda iyo kala-baxa inta badan loo baahdo.
Magaca Lowska lix geesoodka ah
Oogada Black oxide, zinc plated (cadaan), maquufin kulul galvanized ama si waafaqsan macaamiisha 'looga baahan yahay
Hore: Countersunk iskutallaab alwaax madaxa
Xiga: 304 316 ahama bir cufan hex domed cap.
Dufan hex leh oo cufan
8.8 maquufin kulul galvanized lowska hex
Qufulka lowska hex
304 316 ahama bir cufan hex domed cap.
Galvanized qafiif ah hex lowska
Midab-zinc Hex lowska khafiifka ah